अवैध असुलीको छानबिन सुरु- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कांग्रेसले गरेन डिजिटलमा भरोसा : मतगणना पट्यारिलो हुने
नेतृत्वका आकांक्षी नेताहरुले नै प्रविधिको उपयोगमा विश्वसनीयताको प्रश्न उठाएपछि कांग्रेसले रोज्यो परम्परागत शैलीको मतदान
मंसिर २०, २०७८ प्रकाश धौलाकोटी
काठमाडौँ — कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा १ सय ३४ पदमा निर्वाचन हुँदै छ भने ४ हजार ५ सय हाराहारी प्रतिनिधि मतदानमा सहभागी हुँदै छन् । परम्परागत शैलीकै निर्वाचन रोजेको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको अन्तिम परिणाम आउन कति समय लाग्ला ?
जबकि अहिलेभन्दा थोरै मतदाता र कम पदमा निर्वाचन भएको १३ औं महाधिवेशनमा अन्तिम परिणाम आउन दुई साता लागेको थियो । त्यतिबेला ३ हजार १ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए भने ६४ पदमा मात्रै निर्वाचन भएको थियो ।
कांग्रेस महाधिवेशन मंसिर २४ देखि हुँदै छ । निर्वाचन समितिले सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि भिन्न–भिन्न रङ र आकारका २९ वटा मतपत्र तयार गरेको छ । ‘धेरै पदमा मतदान गर्नुपर्नेछ, एक जनालाई मतदान गर्नै दुई घण्टाभन्दा धेरै समय लाग्छ,’ केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘हामीले एकैपटक धेरैले मतदान गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्दै छौं ।’ समितिले राष्ट्रिय सभागृह र पुलिस क्लबलाई मतदान केन्द्र बनाउने तयारी गरेको छ ।
आफ्नै पार्टीको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागले बनाएको डिजिटल भोटिङ प्रविधिप्रति सभापति शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेताले नै भर नगरेपछि कांग्रेसले वडादेखि पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशमा जस्तै गरी कागजको मतपत्र प्रयोग गरी निर्वाचन गर्न लागेको हो । ‘यसपटक पद संख्या धेरै छ, प्रतिनिधि पनि धेरै छन्, त्यसैले परिणाम आउन यसपटक झन् बढी समय लाग्न सक्छ,’ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने । विभागले गत साउन पहिलो साता नै डिजिटल भोटिङको आफ्नै प्रविधि विकास र सुनिश्चित गरेको जनाएको थियो ।
निर्वाचन समितिका संयोजक घिमिरेले ‘म्यानुअल भोटिङ’ बाटै नेतृत्व चयन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘यो राजनीतिक निर्णयले हुने कुरा हो, डिजिटल भोटिङ प्रयोग गर्नेबारे विगतमा छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेन, त्यसैले म्यानुअल भोटिङकै प्रयोग हुन्छ, हामी त्यसैको तयारी गरिरहेका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘अब त निर्णय भए पनि उपयोग गर्न सकिने अवस्था छैन ।’
डिजिटल भोटिङ प्रयोग गर्दा परम्परागत शैलीको भन्दा कम खर्च हुने र थोरै समयमा परिणाम आउने हुन्छ । कांग्रेसकै हाराहारी पदमा निर्वाचन गरेको एमालेले हालै सम्पन्न १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पहिलो पटक विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेको थियो । केन्द्रीय कमिटीका १ सय २७ पदमा मतदान गर्न सात घण्टा लाग्यो तर नतिजा चार घण्टामै आएको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि अध्यक्षबाहेकका पदमा भोटिङ मेसिनकै प्रयोग गर्‍यो । मत परिणाम पनि केही घण्टाभित्रै आयो । कांग्रेस नेताहरूले भने आफ्नै पार्टीले बनाएको डिजिटल भोटिङ प्रविधिमा समेत भर गरेनन् ।
विद्युतीय भोटिङबारे छलफल भएको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले त्यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका थिए । पार्टीले बनाएको डिजिटल भोटिङ प्रविधिबारे प्रचार विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले गत साउन पहिलो साता बसेको पदाधिकारी बैठकमा नमुना प्रस्तुत गरेका थिए । तर, बैठकमा सभापति देउवाले नै प्रविधिको प्रयोगमा विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्ने बताएका थिए । ‘प्रविधि तयार भयो, राम्रो भयो तर यसलाई सबैले मान्दैनन्, यो के हो, कसरी प्रयोग गर्ने ? यसबारे शंका हुन्छ, प्रश्न उठ्छ,’ देउवाले भनेका थिए ।
त्यसयता डिजिटल भोटिङ प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे कांग्रेसमा कुनै छलफल नै भएको छैन । ‘कोरोना महामारीले एकै ठाउँमा जम्मा भएर महाधिवेशन गर्न नसकिने अवस्थामा प्रविधि प्रयोग गरौं भनेर दुई महिना लगाएर निर्माण गरियो, त्यसबारे प्रवक्ताज्यूले पदाधिकारी बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो,’ विभागका एक सदस्यले भने, ‘तर त्यसपछि डिजिटल प्रविधिबारे चर्चा भएन । हाम्रो मिहिनेत मात्रै खेर गयो ।’ पदाधिकारी बैठकमा सहभागी एक नेताले नेताहरूले डिजिटल भोटिङको प्रयोगमा विश्वसनीयतासँगै त्यसको गोपनीयता, सुरक्षा र गणनामा आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
केन्द्रीय सदस्य पौडेलले पनि कांग्रेसले अहिल्यै ‘डिजिटल भोटिङ’ गर्ने अवस्थामा नरहेको बताए । ‘पार्टीमा विधानसम्मत काम गर्ने, वैज्ञानिक ढंगबाट पारदर्शी संगठन निर्माण, डिजिटल भोटिङ प्रयोग जस्ता कार्य गर्न सकिने परिस्थिति निर्माण भएको छैन । कसैले कसैमाथि विश्वास गर्न सकेको अवस्था छैन । केन्द्रीय कार्यालयमा नेतृत्वको एकाधिकार छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसमाथि हाम्रो नेतृत्व प्रविधिमैत्री छैन, त्यसैले भोटिङमा प्रविधिको प्रयोग हुन सक्ने अवस्था छैन ।’ नेताहरूलाई प्रविधिमा भन्दा पनि प्रविधि सञ्चालकहरूमाथि भर नलागेको उनको दाबी छ ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने कांग्रेस पुरानो राजनीतिक दल भएकाले परम्परागत शैलीको आदत छुटाउन समय लाग्ने बताउँछन् । ‘हामी अन्य दलभन्दा प्रविधिमैत्री भइसकेका छौं, यो प्रविधिप्रतिको विश्वसनीयताको समस्या होइन तर एउटा पुरानो दलमा अभ्यासमा नल्याइरहेको चिज एकैपटक अभ्यासमा ल्याउन सामान्य संशय आउनु पनि अस्वाभाविक होइन, त्यसकारण पहिले जे प्रयोगमा थियो, त्यही प्रयोग गर्दा सबैका लागि भरपर्दो लागेको हो,’ उनले भने ।
उनले कांग्रेसले पार्टीको संगठन र रेकर्डहरूलाई भने प्रविधिमैत्री बनाएको दाबी गरे । ‘कांग्रेस सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल हो, हामी आफ्नै परम्परागत शैलीमा हुर्किएका छौं । तैपनि प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएका छौं । संगठन, सदस्यहरूको रेकर्ड पद्धति आदि इत्यादि कुरामा अन्य दलभन्दा पनि हाम्रो राम्रो भएको छ,’ प्रचार विभागका प्रमुखसमेत रहेका प्रवक्ता शर्माले भने ।
प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ ०८:२०